Ciyaari waa gelin dambe miyaa? - BBC News Somali
Ciyaari waa gelin dambe miyaa?
29 Sebtembar 2013
Image caption Ciyaartoy Mesut Ozil oo wax ku kordhiyay Liverpool
Maanta waxaa jira labo ciyaarood:
Tan hore waxaa isaga hor imanaya kooxaha Stoke iyo Norwich. Waxay bilaabanaysaa 13:30 waqtiga London.
Ciyaarta 2aad waxaa isku haleelaya Sunderland iyo Liverpool. Waxay dhacaysaa 16:00 galabnimo saacadda London.
Liverpool waxay leedahay 10 dhibcood waxay doonaysaa haddii ay galabta badiso inay hoggaanka wada qabtaan Arsenal oo min 15 dhibcood ay isugu yimaadaan.
Stoke waxay leedahay toddoba dhibcood haddii ay badiso Liverpool-na laga badiyo waxay rabtaa inay toban dhibcood isugu yimaadaan Liverpool, Manchester City iyo Hull oo iyagu dhammaantood hadda min toban dhibcood leh.
Everton iyo Aston Villa min sagaal dhibcood ayay leeyihiin.
West Brom iyo Cardif-na min siddeed dhibcood ayay taagan yihiin.
Sanadkan tartanka horyaalku xiisa gaar ah ayuu leeyahay waxaana ilaa hadda ugu yaraan min hal cayaar laga badiyay kooxaha waaweyn iyadoo weliba Manchester United ay la kulantay labo guuldarro oo lama filaan ah.
Hase ahaatee weli kow ma joogo tartanku oo waxaa lagu jiraa toddobaadkii lixaad oo keliya sidaas darteed waxaa dhici karta in kooxaha waaweyni gadaal ka soo kabtaan oo oranaya ciyaari waa gelin dambe.